Cabsi laga qabo Shabaab inay weerar ka geystaan Gobolka Waqooy... | Universal Somali TV
Cabsi laga qabo Shabaab inay weerar ka geystaan Gobolka Waqooyi Bari Kenya
January 01 2017 06:26:12
Iyadoo Saraakiisha ammaanka dowladda Kenya ay sheegayaan in laga cabsi qabo in dagaalyahanada Al-Shabaab ay weerar ka geystaan dalka Kenya, ayaa dowlada Kenya waxa ay ciidamo dheeraad ah ay geystay xadka ay la wadaagto dalka Somaliya.
Dowladda Kenya ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay qorshaynayaan in ay dalka Kenya ay ka geystaan weeraro bilowga maalmaha sanadka cusub.
Warbixin hoose oo laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ilaha sirdoonka ee dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ciidamo dheeraad ah ay geysay xadka ay la wadaagto dalka Soomaaliya , si looga Hortago weeraro ka dhaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka kenya.
Ammaanka Magaalooyinka Waa weyn ee dalka Kenya ayaa si weyn loo adkeeyay .
Al-Shabaab ayaa Kenya kusoo qaadeysay weeraro laga soo bilaabo sanadkii 2011 markaasi oo ciidanka dowladda kenya ay gudaha usoo galeen Soomaaliya.
Kan-xigaFowsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo ku guul...
Kan-horeDoorashada Aqalka hoose ee Somaliland...
34,195,709 unique visits